अलैंची जोनको रुपमा चिनिदै प्रदेश १ - कुन जिल्लाको उत्पादन कति ??? - Baikalpikkhabar
अलैंची जोनको रुपमा चिनिदै प्रदेश १ – कुन जिल्लाको उत्पादन कति ???
प्रदेश सरकारले प्रदेश १ लाई अलैची जोनको रुपमा बिकास गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रममा पुर्वी पहाडी जिल्लामा मुख्य नगदेवालीको रुपमा लगाइने अलैची खेतीलाई समावेश गरेको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिक्तामा कृषि क्षेत्रलाई समावेश गरी बजेटको ठुलो हिस्सासमेत छुट्याइएको छ । जसमा नगदेवालीका रुपमा रहको अलैंची खेतीको संरक्षण, पर्वद्धन र प्रोत्साहनको लागि नीतिसमेत ल्याएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने अलैंची शतप्रतिशत निर्यात हुदै आएको छ । प्रदेश सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रम अनुसार अलैंची विकास वोर्ड गठन गर्ने तयारीसमेत अगाडि बढाएको छ । अलैंची विकास वोर्ड गठनको लागि प्रदेश सरकारले ५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइसकेको छ । प्रदेश १ सरकारले पुर्वी नेपालको मुख्य नगदेवालीका रुपमा लगाइने अलैंची खेतीको पर्वद्धनका लागि विकास वोर्ड गठनको तयारी थालेको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अलैंची मसलाको रुपमा सबै भन्दा बढी तेश्रो मुलक निर्यात हुने मुख्य नगदेवाली हो ।
जसमा वार्षिक १०अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मूल्यको निर्यात हुने गरेको छ । प्रदेश १ का १४ जिल्ला मध्ये हिमाली र पहाडी जिल्लामा ठुलो क्षेत्रफलमा यसको खेती हुँदै आएको छ । यही प्रदेशबाट सबै भन्दा बढी अलैंचीको उत्पादनपनि हुने गर्दछ । कुल उत्पादनको ८३ प्रतिशत अलैंची प्रदेश १ मा उत्पादन हुने गरेको छ भने कुल अलैंची खेती हुने क्षेत्रफल मध्ये ९२ प्रतिशत प्रदेश १ मा पर्दछ ।
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर १२ हजार ५ सय ८ हेक्टरमा अलैंची खेती हुदै आएको छ । जसमा प्रदेश १ का हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा ११ हजार ६ सय ७ हेक्टर क्षेत्रमा अलैची खेती रहेको छ ।अलैंचीको कुल उत्पादन वार्षिक रुपमा ६ हजार ५ सय २० मेट्रिकटन रहेको छ । जसमा प्रदेश १ मा मात्र ६ हजार मेट्रिकटन भन्दा बढी उत्पादन हुँदै आएको छ ।
कुन जिल्लामा कति उत्पादन
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सबै भन्दा बढी पुर्वी हिमाली जिल्ला प्रदेश १ मा पर्ने ताप्लेजुङमा ४ हजार ५ सय हेक्टरमा हुदै आएको छ । ताप्लेजुङबाट मात्र बाषिर्क २ हजार ४ सय ९० टन उत्पादन रहेको छ । त्यसैगरी संखुवासभा जिल्लामा २८ सय २४ हेक्टरमा अलैंची खेती हुँदै आएको छ ।
कुल उत्पादन १ हजार १ सय २९ मेट्रिकटन रहेको छ । यता सोलुखोम्बु जिल्लामा १सय ९७ हेक्टरमा अलैंची खेची लगाइएको छ । जिल्लाबाट ४० टन अलैची उत्पादन आएको छ ।
मध्यपहाडी जिल्ला पाँचथरमा १९ सय ५० हेक्टरमा अलैची खेती गरिदै आएको छ । पाँचथरमा ७ सय ९८ मेट्रिकटन उत्पादन हुँदै आएको छ । इलाममा १६ सय हेक्टरमा अलैंची खेती हुँदै आएकोमा कुल उत्पादन ५ सय ७६ मेट्रिकटन रहेको छ ।
तेह्रथुममा ७ सय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा ह’ुदै आएको अलैंची खेतीबाट वार्षिक २ सय ५० टन उत्पादन हुँदै आएको छ ।
धनकुटामा २ सय ९९ हेक्टरमा हुँदै आएको अलैंची खेतीबाट ९७ दशमलव ४ टन उत्पादन रहेको छ । भोजपुरमा ६ सय हेक्टरमा हुँदै आएकोमा १ सय ९२ टन अलैंची उत्पादन हुदै आएको छ । खोटाङमा १४ सय ४ हेक्टरमा हुँदै आएको अलैंची खेतीले वार्षिक ४ सय ४० टन उत्पादन दिदै आएको छ । ३९ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको ओखलढुगामा ६ टन अलैची उत्पादन हुँदै आएको छ । उदयपुरमा भने ३७ हेक्टरमा अलैंची खेती हुँदै आएकोमा १४ दशमलव ९ टन उत्पादन हूदै आएको छ ।
यता मोरङको उत्तरी भेगको ७० हेक्टरमा अलैंची खेती हुँदै आएको छ , जसमा ६१ दशमलव ७ टन वार्षिक उत्पादन रहेको छ ।
बिहिबार, १२ मंसिर, २०७६, बिहानको ११:१५ बजे